ကျောင်းသား စစ်တမ်း ကိရိယာ
ဆရာ စစ်တမ်း ကိရိယာ
လိုအပ်သော မှန်ကန်သော စစ်တမ်းကောက်ယူသော ဆော့ဝဲ အား သင်ရွေချယ်ပါ
အားလုံးသည် အသုံးပြုသူများအတွက် လိုအပ် ခေတ်မှီသော မြန်ဆန်သော ကူညီသည့်ဝန်ဆောင်မူများပါရှိကြသည်။
ဈေးနှုန်း / ၃ လ
အကန့်အသတ်မရှိသော အဖြေများနှင့် စစ်တမ်းရယူနိုင်သူများ
2 စစ်တမ်းများ (?)
Live Chat အထောက်အပံ့ (?)
ဈေနှုန်း / နှစ် / အသုံးပြုသူ
ကျွန်ုပ်တို့ ကမ်းပက်စ်ထုတ်လုပ်ရေးတွင် ဈေးအနည်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း အာမခံပါသည်။
သင်သည် တူညီသော ဝန်ဆောင်မှုအတွက် ပိုမိုနည်းသောဈေးကမ်းလှမ်းနိုင်သူကို ရှာတွေ့ပါက ပညာရေးအတွက်အသုံးပြုကြောင်း အချိန်တူညီကြောင်းသေချာပါက ဈေးနှုန်းကို ညှိပေးမည်ဖြစ်သည်။
သင်သည် သက်သာသော ဈေးနှုန်းကိုရှာတွေ့ပါက sales@examinare.orgတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို ဆက်သွယ်ပေးပါ။
မေးခွန်းအမျိုးအစားများ / စစ်တမ်းအချက်အလက်များ။
တစ်ခုထက်ပိုသောအဖြေများထဲမှတစ်ခုရွေးခြယ်ရသောမေးခွန်း (အဖြေမှန်တစ်ခုမှမပါ သို့မဟုတ်တစ်ခုထက်မကပါရှိနိုင်)
အသံဖိုင်များထည့်မည်။ (Flash Player လိုအပ်သည်။)
၀က်ဘ်ဆိုဒ် / မိုဘိုင်းလ် လင်ခ့်
Excel မှ တုံ့ပြန်သူများတင်သွင်း
မိုဘိုင်းလ် APPS API
မိုဘိုင်းလ် SSL ဖွင့်ခြင်း/ပိတ်ခြင်း
Twitter မှတစ်ဆင့် မဲပေးခြင်း
ရလဒ်များကို Excel သို့တင်ပို့မည်။
Live Chat အထောက်အပံ့
LTR နှင့် RTL